Pep Guardiola Oo Ka Hadlay Cida Masuulka Ka Ah Guuldaradii Kasoo Gaartay Kooxda Leeds United
HomeWararka Ciyaaraha MaantaPep Guardiola oo ka hadlay Cida masuulka ka ah guuldaradii kasoo gaartay kooxda Leeds United
April 10, 2021 Wararka Ciyaaraha Maanta, Horyaalka Ingiriiska 0
Pep Guardiola ayaa masuuliyada guuldaradii Manchester City ka soo gaadhay Leeds hoos u dhigay qaab ciyaareedka kuwa garoonka ku jira halkii uu ka ahaan lahaa ciyaartoydii ciyaarta fadhiyay.
tababaraha City ayaa sheegay inuusan ka qoomameynin inuu todobo isbedel ku sameeyo xidigaha guusha ka gaaray Dortmund isagoo ka xumaaday daqiiqado yar oo kooxdiisu ay xakameyn weyday isla markaana la ciqaabay.
“Markaad guuleysato, waxaad tahay maskax iyo markii lagaa badiyo … Waxba kama qabin xulista maxaa yeelay waxaan aaminsanahay in badan oo iyaga ka mid ah,” ayuu yiri.
“Laga yaabee inaysan i aaminin laakiin waan ku kalsoonahay iyaga maxaa yeelay hadii aanan aaminin iyaga ma ciyaareen. John waxa uu ahaa mid cajiib ah, Nathan, Benja.
Man City ayaa guul darada kasoo gaartay Leeds ay soo yareeneysaa dhibcaha ay ku heysay hogaanka horyaalka.